के तपाईं पनि मायामा फस्नु भएको छ ? यस्ता छन् मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा हुने ९ फाइदा,पढ्नुहोस् ! – kollywood hungama
के तपाईं पनि मायामा फस्नु भएको छ ? यस्ता छन् मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा हुने ९ फाइदा,पढ्नुहोस् !
एजेन्सी।माया गर्नु वा मायाजालमा पर्नु आफैँमा अनौठो अनुभूति हो, जसको अनुभव माया गर्नेलाई वा मायाको जालमा पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । माया वा ‘लभ’ले एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध जोड्ने अवसर मात्र दिँदैन, स्वास्थ्यमै अभूतपूर्व फाइदा गर्छ । मायाका अनगिन्ती स्वास्थ्य फाइदा छन् । मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा निम्न नौवटा फाइदा यस्ता छन्ः
डिप्रेसन जित्ने शक्ति:
कमजोरीबाट टाढै राख्छ:
मासिक धर्म नियमित:
Previous क्यालिफोर्नियाको इडिलविल्ड सहरको मेयर कुकुरलाई बनाइयो
Next दशैंमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ! गाडीमा यात्रा गर्दा उल्टी हुन्छ ? जानिराख्नुहोस् रोक्ने घरेलु उपाय।